पुतली Staxx | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
पुतली Staxx एक शीर्ष स्लट खेल उद्यान को एक जादुई कहानी विषय आधारित, निश्चित हो कि पुतलीहरु र फूल तपाईं प्रकृति बन्द लिन. त्यहाँ पाँच रील र तीन पङ्क्ति फैले छ कि यस खेल चालीस paylines छन्. को रील पहाड र वरिपरि रूखहरू र फूल को बगैचा संग एक निर्मल नदी धाराको पृष्ठभूमि विरुद्ध सेट. त्यहाँ खेल दिइएको एक mesmerizing संगीत आफ्नो मन र शरीर राख्न भनेर सबै साथ आराम छ. यो खेल मा wager गर्न, त्यहाँ £ 0.20 र £ 400 हरेक स्पिन बीच सीमा सेट गरिएको छ. खेल मोबाइल मा नाटक छ, ट्याब्लेट र डेस्कटप कम्प्युटर.
यो जादुई थिम्ड शीर्ष स्लट खेल NetEnt विकास भएको थियो. तिनीहरूले अनुभव दुई दशकमा अनलाइन क्यासिनो स्लट को अग्रगामी छन्. तिनीहरूले विभिन्न भिन्न मा एक सय भन्दा बढी खेल सिर्जना गरेका, एक अद्वितीय अनुभव र सुविधाहरू प्रत्येक खेलाडीहरू केही प्रभावशाली पुरस्कार जित्न मदत गर्न.
येस्मा शीर्ष स्लट खेल, तपाईं विभिन्न फूल र एक पुतली को रंगीन प्रतीक खेल्न सक्छ. को चमकिलो पुतली संग शीर्ष तिर्ने प्रतीक हो 60 पटक आफ्नो शर्त. रातो, गुलाबी र बैंगनी दोहरी रंग फूल एक payline मा तपाईं 40x गर्दा पाँच एक प्रकारको भूमि को भुक्तानी. जे, A, K र खेल कार्ड को क्यू 20x प्रत्येक सानो कम stakes तिर्न. प्रतीक पछि स्थितिहरु मा रील को बायाँबाट दायाँ देखा गर्दा सबै WINS मानिन्छ. तपाईं उन्नत सुविधाहरू देखि जीत मदत गर्न दुई बोनस प्रतीक हो. तिनीहरूले पत्रदल विभिन्न रंग संग एक फूल र एक लैवेंडर रंग फूल को प्रतीक हो.
बोनस जंगली: पत्रदल विभिन्न फरक रंग संग फूल जंगली प्रतीक हो. यो स्क्याटर ट्रिगर कि बाहेकको खेल सबै अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन.
स्क्याटर बोनस: एक लैवेंडर रंग फूल को प्रतीक यो को स्क्याटर छ शीर्ष स्लट खेल. यो पुरस्कार तपाईं 5,6or7निःशुल्क खेल 3,4or5प्रतीक landings. निःशुल्क spins समयमा, तपाईं केवल हरियो रंग रेशमको कोयो को रील मा प्रतीक प्राप्त. सबै चमकिलो व्यक्तिहरूलाई पुतलीहरु बगिरहेको मा परिवर्तन र त्यसपछि तिनीहरूले रील को बाँया चरम उत्प्रेरित. सबै संचित पुतलीहरु सबै spins को अन्त्यमा विभिन्न जीत संयोजन र बडा पुरस्कार प्रदान.
एक रंगीन आश्चर्यजनक ग्राफिक्स र सुविधाहरू मन उड्ने संग, यो शीर्ष स्लट खेल केवल आफ्नो आँखा एउटा व्यवहार हो. यो एउटा RTP संग सबै भन्दा राम्रो natured THEMED स्लट छ 96.80%.